Oracle na-emelite nkesa Linux ya iji gbakwunye nkwado maka Red Hat Enterprise Linux 7.6 | Site na Linux
Oracle na-emelite nkesa Linux ya iji gbakwunye nkwado maka Red Hat Enterprise Linux 7.6
Oracle ekwuputala na Oracle Enterprise Linux 7.6 General Nnweta, mmezi mmezi nke mekọrịta na isi okpu okpu Enterprise Linux 7.6 repositories.
O sitere na Red Hat Enterprise Linux 7.6 sources, Oracle Enterprise Linux 7.6 system na-abịa na Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) mbipute 5 wuru 4.14.35-1818.3.3, dị maka 64-bit na ARM architectures, na mgbakwunye na mbipụta ọzọ. na Red Hat Kernel 3.10.0-957, dị maka naanị 64-bit system.
Nke a bụ ihe dị ọhụrụ na Oracle Enterprise Linux 7.6
Na mgbakwunye na imelite kernel, Enterprise Linux 7.6 na-abịa na ọtụtụ atụmatụ na atụmatụ ọhụrụ, gụnyere nkwado maka ijikwa ụzọ, na-arị elu ma na-ahazi faịlụ sistemụ na mpaghara Pacemaker, yana ike soro ntinye na melite nchịkọta site na iji ihe omume. Nyochaa.
A DAX (Direct Access) usoro nyocha maka usoro faịlụ EXT na XFS dịkwa na mwepụta a. Maka sistemu AArch64 (ARM64), nsụgharị a na-enyere Dtrace aka ma dọrọ koodu ahụ gaa na ebe nchekwa 5 nke Unbreakable Enterprise Kernel.
Oracle ekwuola na ha ga-aga n'ihu na-akwado sistemụ BTRFS na Oracle Enterprise Linux ọbụlagodi mgbe Red Hat wepụrụ ya na Red Hat Compatible Kernel. Nwere ike ibudata Oracle Enterprise Linux 7 Update 6 si Oracle.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Oracle na-emelite nkesa Linux ya iji gbakwunye nkwado maka Red Hat Enterprise Linux 7.6
Aga m echere Centos 7.6, ebe ọ bụ na Oracle anaghị enye anyị ezigbo ISO na-enweghị ịgafe ozi ha ..
Oracle aghaghi inwu
Zaghachi Edgard López
Samsung itinye Linux na smart ngwaọrụ na nkwụnye Dex
Erobọchị enweghị ike ịchọta na VirtualBox